Vaovao - Masinina famokarana mandeha ho azy vaovao ho an'ny Cap Heparin
Masinina famokarana mandeha ho azy vaovao ho an'ny Cap Heparin
Araka ny fantatsika rehetra, ny siansa sy ny teknolojia no ho hery mpamokatra voalohany amin'ny taonjato 21. Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia manaraka hatrany ny fivoaran'ny fotoana. Tamin'ny 17 Jolay 2018, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia nividy milina famokarana mandeha ho azy ho an'ny satroka heparin. Vaovao lehibe ho an'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd. misy fitaomana tsara telo izay ny fahombiazana, ny kalitao ary ny fihenan'ny sandan'ny mpiasa.
Voalohany indrindra, ny milina famokarana mandeha ho azy vaovao ho an'ny heparin dia manana fahombiazana lehibe kokoa noho ny manual. Heparin cap no vokatra malaza indrindra amin'ny orinasanay, noho izany dia niatrika fanontaniana iray izy fa ny fangatahana dia mihoatra ny famatsiana. Fa izao dia raikitra ny olana rehetra, ny milina famokarana mandeha ho azy vaovao ho an'ny fahombiazan'ny heparin 20 fotoana noho ny teo aloha, izay mitahiry fotoana be ho an'ny asantsika. Satria olona iray ihany no mila mampiasa an'io milina io, amin'izay ny asa hafa dia afaka mandinika bebe kokoa ny zavatra hafa.
Faharoa, milina famokarana mandeha ho azy vaovao ho an'ny heparin cap koa dia manome vokatra avo lenta kokoa. Ny tombony iray azo avy amin'ny masinina dia ny milina tsy mahalala izay reraka ary ny milina tsy diso mihitsy raha tsy tapaka. Tamin'ny andro taloha, ny orinasanay dia mila mandany vola amin'ny fialan-tsasatry ny akora sasany, fa ankehitriny ny mpiasa ihany no mila mametraka ireo akora ao anaty masinina, mihodina eo ambany, avy eo efa vonona hampiasa heparin ambony.
Farany fa tsy ny kely indrindra, ny milina famokarana mandeha ho azy vaovao dia mampihena ny vidin'ny asa. Io no zava-misy tsy maintsy ekentsika fa manolo ny olombelona ny masinina. Mety tsy vaovao mahafaly ho an'ny rehetra izany, fa tena manampy ny orinasa handamina ny loharanon-karena arakaraka ny antony, izany hoe afaka mampiasa vola bebe kokoa ny orinasa hampitomboana ny kalitaon'ny vokatra, ary ny orinasa afaka mampiasa vola bebe kokoa hianarana teknolojia vaovao. Karazana lozabe io, fa ny fivoaran'ny fotoana.
Fotoana fandefasana: Jul-17-2018
Tube fihinanan-jaza, Pads amin'ny alikaola, Ny haben'ny lelan'ny fandidiana, Alikaola, Suction Catheter, Iv Catheter,